Status ny mampifandray politika
Sokajy://www.knwautobody.com tonga soa ny rohy ho ity tranonkala ity [nanao araka ny teny mampifandray ity politika].
[Politika mampifandray izany dia natao mba hanampy anao, rehefa mampifandray ho ity tranonkala ity.] OR [Pampiasana ho tranonkala ianao manaiky ho voafatotry ny fepetra politika mampifandray ity.]
Links ny Sokajy://www.knwautobody.com
Links manondro ny Sokajy://www.knwautobody.com tsy tokony mamitaka.
Rohy mety ho foana ny teny tokony ho ampiasaina.
[Indraindray isika dia mety vaovao farany ny URL rafitry ny namany Sary, ary raha tsy manaiky an-tsoratra raha tsy izany, ianao no tompon'andraikitra amin'ny fanavaozana hoe rohy.] Aza mampiasa ny famantarana mba manana rohy mankany amin'i ity tranonkala (na raha tsy izany) tsy voasoratra mazava ny fahazoan-dalana.
Tsy maintsy Tsy avelan'ny ny votoatin'ny tranonkala ity na mampiasa ny teknolojia toy izany koa momba ny votoatin'ny tranonkala ity.
Links avy amin'ny tranonkala ity
Tranonkala ity dia ahitana rohy amin'ny tranonkala hafa nananany sy niasa ny antoko fahatelo. Ireo rohy Tsy endorsements na ny tolo-kevitra.
Sokajy://www.knwautobody.com tsy misy fanaraha-maso ny votoatin'ny antoko fahatelo tranonkala, ary Sokajy://www.knwautobody.com tsy manaiky andraikitra ho azy ireo na ho misy fahaverezana na fahasimbana mety hitranga avy amin'ny fampiasana azy ireo.
Fanesorana ny rohy
Ianao manaiky fa, tokony mangataka ny famafana ny rohy ho Sokajy://www.knwautobody.com izay ao an-fanaraha-maso, dia hamafa ny rohy avy hatrany.
Raha te anay mba hanala ny rohy ny tranonkala izay tafiditra ao amin'ny Sokajy://www.knwautobody.com, dia mifandraisa aminay amin'ny fampiasana ny fifandraisana antsipirihany ambany. Mariho fa raha tsy manana zo hitaky egal fanesorana, toy izany dia ho amin'ny fanesorana ny fisainana mazava isika.]
Fanovana politika mampifandray izany
Mety ataovy tsara politika mampifandray izany na oviana na oviana amin'ny alalan'ny famoahana dika vaovao izany
Tokony ianao manana fanontaniana mikasika izany politika mampifandray, dia mifandraisa aminay mampiasa ny antsipirihany dia nivoaka eto ambany: